Ihe mgbagwoju anya maka ụmụaka | Crafts On
Nnọọ mgbaghoju anya maka ụmụaka
Nke Torres | 26/09/2021 23:19 | Ọrụ aka
Ihe egwuregwu mgbagwoju anya bụ otu egwuregwu kacha mma maka ụmụaka, site na nke ọdụdụ ruo ndị nwere ụdị ọrụ dị iche iche. Enwere ụdị egwuregwu mgbagwoju anya niile na ha niile na -eweta nsonaazụ dị mma, dabere na njirimara ụmụaka.
N'aka nke ọzọ, egwuregwu dị na akwa dị ka mmetụta zuru oke maka ịrụ ọrụ na uche na nka moto. Kedu ihe na -eme ka ihe mgbagwoju anya a bụrụ ihe egwuregwu ụmụaka zuru oke iji zụlite ikike ha niile. Ma nke anụ ahụ na nke anụ ahụ ma ọ bụ nke mmụọ. Ke adianade do, ọ dị mfe ịrụ na Ị nwere ike ịmepụta ụdị ọnụọgụ ọ bụla maka iji na ịnụ ụtọ ụmụaka gị.
1 Otu esi emepụta mmetụta egwuregwu mgbagwoju anya site na nkwụsị
1.1 Họrọ imewe iji mepụta mgbaghoju anya
Otu esi emepụta mmetụta egwuregwu mgbagwoju anya site na nkwụsị
Ka imepụta ihe mgbagwoju anya a anyị ga -achọ ihe ndị a:
Nnọọ ákwà dọrọ
Hilo ka onye na -akpa ihe
Ọ bụ oke
Mpempe akwụkwọ nke akwụkwọ
Họrọ imewe iji mepụta mgbaghoju anya
Mbụ anyị ga -ese ihe atụ a họpụtara n'akwụkwọ, na nke a bọọlụ nwere agba. Anyị na -ebipụ akụkụ dị iche iche iji weta mmetụta.
Anyị na -eji ebu ahụ emepụta iberibe dị na akwa ahụ nwere mmetụta, nke ọ bụla nwere agba dị iche. Maka ntọala Anyị na -ebipụ akụkụ 30 ruo 30 nke mmetụta sentimita.
Ugbu a, anyị ga -eji eriri ọlaọcha iji mepụta obere ọnya na nsọtụ iberibe egwuregwu mgbagwoju anya, ka ha wee maa mma karịa.
Iji mepụta ọdịdị nke ihe mgbagwoju anya na ntọala, anyị na -aga debe akwụkwọ mpempe akwụkwọ ma see na akwa ahụ. Anyị na -eji eri akpa ihe, anyị na -ese iberibe ha otu otu, na -eji agba dị iche iche. N'ikpeazụ, anyị na -etinye ụfọdụ iberibe velcro ka anyị nwee ike isonye na iberibe egwuregwu ahụ.
Ugbu a, anyị ga -etinye akụkụ nke ọzọ nke velcro nrapado na iberibe egwuregwu mgbagwoju anya iji nwee ike isonyere ha na ntọala yana na ọ bụ ọnụ ọgụgụ zuru oke.
Ma otu a ka iberibe ihe mgbagwoju anya a siri dị nke ị ga -eji rụọ ọrụ agba, nka moto, itinye uche ma ọ bụ mmetụta nke ụmụntakịrị gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts na ihe » Ọrụ aka » Nnọọ mgbaghoju anya maka ụmụaka
Anụmanụ 5 ga -eso ụmụaka mee n'ụlọ
Echiche ịchọ mma DIY maka ụlọ ihi ụra